2020-01-01 2020-03-08 admin
अस्ट्रेलिया ।नयाँ वर्ष सँगै अष्ट्रेलिया को भिसा तथा स्थायी अनुमति नीतिमा कडाई हुने भएको छ ! अंग्रेजी नयाबर्ष आज २०२० जनवरी १ देखि सुरु भएको छ ! नया वर्ष को सुरुवात भएसंसंगे अस्ट्रेलियन सरकार ले वर्ष फेरीए संगसंगै आफ्ना विभिन्न नीतिहरुमा फेरबदल गरिरहन्छ ! प्रत्यक वर्ष अस्ट्रेलियन सरकार ले भिषा नीतिमा फेरबदल गर्दै आइरहेको सरकार ले यो वर्ष पनि केहि परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ! सरकारले परिवर्तन गर्ने भिसा नीतिको कारण अष्ट्रेलिया आइपुग्ने लाखौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । भिसा नीतिकै कारण विद्यार्थीहरुको योजना समेत प्रभावित हुने…